INHLANGANO IBUNGAZE USUKU LWABESIFAZANE NGENDLELA EHLUKILE – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Aug 11, 2021 123
Esithombeni:uMnuz Phakami Ndlovu ngesikhathi bebungaza usuku lwabesifazane ngendlela ehlukile
INHLANGANO ebhekelele ukuthuthukiswa komphakathi kanye nokucijwa kwamakhono ehlukene abantu abasha, iPhakamani Empowerment Enterprise ibungaze usuku lwabantu besifazane ngokuthi ihambele eWushwini, KwaNgcolosi.
Umsunguli wayo nguPhakamani Ndlovu uthe bakhethe ukubungaza lolu suku ngokuthi abantu abasha bakule ndawo bahlangane babe yimbumba. Bethula iKwaNgcolosi Progressive Mens Hub okuyinhlangano athe izosetshenziselwa ukubhunga kabanzi ngezinselelo eziningi kakhulu ezikhinyabeza abantu besilisa.
Phakathi kwezinto athe zibonakala ziphazamisa kakhulu impilo yabantu abasha abaphila kulesi sikhathi samanje uphuzo oludakayo athe seludale umonakalo omkhulu kubantu abasha abaningi. Okunye akubalulile ukwanda kwabesifazane abakhulelwayo besebancane. Ukugqoza kwamathuba omsebenzi uthe khona kumane kudale umonakalo omkhulu kakhulu.
“Zonke lezi zinkinga iqiniso lithi zibhekene nje ngqo nabantu abasha. Ngakho ke kumqoka ukuthi sisebenzisane ukuze sizokwazi ukuzinqoba. Kumele silwe ukuze sizophila impilo engcono,’’usho kanje ngokukhulu ukuzethemba lokhu.
Umvalelandlini uthe nawo udale umonakalo omkhulu kubantu abasha njengoba sekukhona abanye abantu abasha abaphelelwe yimisebenzi ngesikhathi kuvumbuka ukhuvethe icovid 19.
Ngokusho kukaPhakamani ukuguquka kwabantu besilisa kungaholela ekutheni nabantu besifazane nabo kube lula kakhulu ukuthi babukele kokuhle okwenziwa ngabantu besilisa.
Echaza uthe: ‘’Manje sesibona inqwaba yamantombazane amancane aphuza kakhulu utshwala okuyinto ebalimazayo kakhulu uma kukhulunywa ngekusasa labo. Abagcini ngokuphuza baze bagcine sebelala khona ezindaweni zobumnandi okuyinto engeyinhle ukuthi ingenziwa ngumuntu wesifazane,’’ kuchaza uPhakamani.
Uthe kumqoka kakhulu ukuthi bonke abantu abasha basukume bame ngezinyawo baqinisekise ukuthi bayazinqoba zonke izinto ezibonakala ziphazamisa ikusasa labantu abasha. Uthe kuyadabukisa kakhulu ukubona amantombazane amancane aneminyaka engu-15 ethola abantwana.
“Sifuna ukubona abantu abasha baseWushwini bephila impilo engcono kakhulu kunale abayiphila manje. Sinethemba elikhulu ukuthi konke kuzogcina kubuyele esimweni inqobo nje uma sibambisane,’’usho kanje.
Uthe kunamakhono abantu abasha abanawo okumele acijwe athe kungenzeka bagcine sebephila ngawo.